Ny Telestream dia mampiseho ny filaharan'ny vokatra sy serivisy farany indrindra avy amin'ny Ingest ka hatrany amin'ny fanaterana kalitao ao amin'ny NAB NY - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Tape dia mitaky amin'ny fitomboana data tsy mbola nisy
Afaka mifindra amin'ny fangatahana fandefasana horonan-tsary ve ny haino aman-jery?
Dalet Inks dia manamboatra ny efitrano fampivoarana lehibe indrindra manerantany amin'ny sehatra miaraka amin'ny fampielezam-peo amerikana avaratra
Manamafy orina ny ekipa mpitantana aziatika i Globecast amin'ny fanendrena an'i Tan See Chai amin'ny maha Sales Head - Distribution
Ny TAG Video Systems dia mitohy ny fanitarana iraisam-pirenena amin'ny alalàn'ny fanendrena ireo teknolojia sary ho mpizara azy any Afrika Atsimo
Ny fakantsary famolavolana Blackmagic sy ny tanjaky ny mpanodina an'i Afrika Atsimo ny rocking the Daisies
Home » News » Ny Telestream dia manasongadina ny filaharan'ireo vokatra sy serivisy farany indrindra avy amin'ny Ingest mankany amin'ny fandefasana azo antoka ao amin'ny NAB NY
Ny Telestream dia manasongadina ny filaharan'ireo vokatra sy serivisy farany indrindra avy amin'ny Ingest mankany amin'ny fandefasana azo antoka ao amin'ny NAB NY
Nevada City, Kalifornia, Oktobra 7th, 2019 - Amin'ny NAB Show NY (Booth N337), Telestream, mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny orkestra fampitam-baovao mifototra amin'ny rakitra, fandefasana fampahalalam-baovao sy teknolojia fanaterana, dia haneho ireo vokatra sy serivisy farany farany ananany mikasika ny lafiny rehetra amin'ny lifecycle media nomerika avy amin'ny fakantsary ho an'ireo mpijery.
Ny orinasam-baovao vaovao toa an'i Netflix, Google sy Amazon dia mitondra fiara ny teknolojia 4K / UHD ho toy ny fomba iray hanaovan'ny mpamorona ny votoaty ny tenany amin'ny alàlan'ny fanomezana traikefa fijerena tsara. Ny fandefasana votoaty amin'ny 4K / UHD miaraka amin'ny HDR dia iray amin'ireo fiovana lehibe indrindra amin'ny traikefa an-tsary amin'ny folo taona mahery - ary mila fanovana sy teknika vaovao ity fanovana ity. Ny fifindrana amin'ny 4K dia misy fiantraikany amin'ny teboka rehetra amin'ny alàlan'ny fizotran'ny horonan-tsary, ary ny injeniera, ny mpandraharaha, ny mpanonta ary ny mpanao loko dia tokony hifanaraka amin'ny fenitra vaovao sy mivoatra izay hanondro ny fomba namoronana sy ampitaina.
Hiantohana ny kalitao tsara indrindra hatrany am-piandohan'ny famokarana mivantana, mandritra ny fanovana, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso fahatokisana mandritra ny fampielezana, ny Prism sehatra fanaraha-maso sy famakafakana dia namboarina ho an'ny IP, SDI sy ny alàlan'ny fiakodia mamono HD, 4K, HDR ary WCG (gamut maro loko). PRISM dia natao hanatsorana ny serasera eo anelanelan'ny IT sy ny Engineering miaraka amin'ny sary mahazatra sy mora azo. Nahazoana fitaovana vaovao toy ny loko sandoka, fitaovana fandrefesana HDR, ary fanohanana ny tambajotra 25G, PRISM dia sehatra fandrefesana miavaka sy voamarina ho avy atsy ho atsy ho an'ny studio, any ivelany, kamio haino aman-jery, fanovana sy ny maro hafa.
Raha ny alàlan'ny fampahalalam-baovao nosamborina dia ny fomba hamoahana entana. Telestream's Media toerana Processing Platform manasongadina fihenam-bidy automatique, fanodinana media ary automatique l'habodement workproduction feno. Ny Vantage dia manampy ny orinasan'ny haino aman-jery sy fialamboly ankehitriny manomana ny fanomanana ny atiny amin'ny endrika rehetra. Ho an'ireo sary misintona, ny Vantage Media Manager manome UI mora foana ho an'ny fanoratana famoronana Mac sy Windows mifototra amin'ny famotorana, fijerena, tag ary alao ny asa ho fanodinana. Ny Vantage dia manome endrika transcoding multiscreen sy votoaty automatique vita amin'ny GPU, raha mitantana ny endrika 4K +, HDR ary Dolby fahitana farany. Ny fandefasana tompo farany ao amin'ny IMF ary koa ny fiovana rehetra ilaina amin'ny VOD sy ny fanaterana sehatra maro dia mahatonga an'i Vantage ho fitaovana ilaina lehibe ho an'ny mpamorona atiny. Miankina amin'ny toerana misy ny haino aman-jery, Vantage dia afaka mihetsika mandeha ho azy ao anaty rahona Vantage Cloud Port na eo amin'ny toerany, mifototra amin'ny fitsipika momba ny orinasan'ny mpanjifa natao hanarahana ny fivezivezena lafo indrindra isaky ny asa.
Ny antoka amin'ny vidin'ny horonantsary:
Ny fitrandrahana automated dia miitatra amin'ny fanaraha-maso kalitao koa Vidchecker ary Aurora manome QC sy fanitsiana miorina amin'ny rakitra izay mitahiry vola mety hitranga amin'ny fandavana sy ny famerenana indray. Ho loham-pianaran'ny famantarana ho an'ny OTT, Multiscreen na TV linear mahazatra. Telestream iQ ary mpiambina Ny vahaolana dia miantoka ny fanandramana horonantsary mety indrindra amin'ny alàlan'ny fitaovana na ny fizahana virtoaly manome valiny feno momba ny kalitao sy ny fahazoana isaky ny toerana ao amin'ny rojo fanaterana.
“Ny kalitao hatrany no ivon'ny zava-drehetra ataontsika Telestream, ”Hoy i Scott Puopolo, Tale Jeneralin'ny Telestream. "Ny fampiasam-bola rehetra ataonay dia natao mba hahazoana antoka fa ny mpanjifanay manana vokatra avo lenta indrindra isaky ny ambaratongam-peo amin'ny haino aman-jery. Io no iray amin'ireo antony lehibe nanorenan'ny fikambanana ny fantsom-pamokarany miaraka aminy Telestream vokatra eo amin'ny fototra.
Fitaovana mivantana sy fanatanjahantena mivantana:
Raha nivoatra ny modely orinasa, ny iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra ho an'ny orinasam-baovao ankehitriny dia ny fanomezana hetsika mivantana tsy misy hatak'andro ho an'ny mpijery OTT sy eo amin'ny sehatra izay safidiny. Telestream dia mitarika ny fomba mivantana amin'ny streaming mivantana OptiQ Monitor, rafitry ny rahona teratany rahona (sy manokana rahona platform agnostika) izay manolotra ny fampielezana tena amin'ny fotoana tena tsy nisy hatrizay teo amin'ny sehatry ny 282 haben'ny rahona any amin'ny faritra ara-jeografika 100. Amin'ny fampiasana ity andiam-panompoana rahona ity, ireo mpampiasa dia afaka manodinkodina tetikasa fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny famandrihana QoE amin'ny horonan-tsary amin'ny fotoana tena izy sy ny fijerena ny tontolon'ny serivisy CDo QoS. Modely amin'ny vidin'ny fandoavan-karama dia midika fa ny mpanjifa dia afaka mandrefy ny tontolony fanaraha-maso amin'ny fangatahana, ary na dia ny "manondraka" arofan-java-misy manokana na zona misy azy miaraka amin'ny teboka fanaraha-maso mba hahafantarana haingana ny loharanon'ilay olana dia avereno ny onja. rehefa vita ilay asa — dia mandoa vola fotsiny ny rafitra mandritra ny fotoana izay ilainy. OptiQ Channel mamela ny fikambanana hamorona fantsona OTT vaovao eo noho eo. OptiQ Channel dia manasongadina fandaharana mivantana avy amin'ny fotodrafitrasa napetraka ao anaty rahona ary ahitana fanaraha-maso hentitra sy fanaraha-maso mihetsika sy fanodinana fanentanana izay mitondra any amin'ny fantsona "fanasitranana" ho an'ny taranaka manaraka.
Famokarana mivantana mivantana:
Ny taranaka manaraka Wirecast Gear, TelestreamNy rafitra famokarana horonantsary mivantana mandresy amin'ny loka dia ho hita ao amin'ny Broadfield booth (N121). Ny fitaovam-piadiana vaovao nataon'i Wirecast Gear dia maneho ny fitomboana fampisehoana lehibe raha oharina amin'ny fitaovan'ny taranaka teo aloha. Miaraka amin'ny kozatra CPU bebe kokoa, hafainganam-pandeha ambony kokoa, RAM haingana, ary ny tahiry NVMe farany, i Wirecast Gear no rafitra fanaovana turnkey ambony indrindra atolotra amin'ny vidiny.
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine fampitana injeniera fampitana Engineering Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw Kat 2015 Kat 2016 Kat Show Kat Show 2016 Kat fampisehoana Careers Las Vegas Kat Show Kat Show Registration NAB16 nabshow National Association ny ireo fahitalavitra Show	2019-10-07
Previous: Mpiara-miombon'antoka amin'ny GBSs Labs miaraka amin'ny NCS Techno Systems hitady ny Mosaic sy CORE.4 Lite ao amin'ny Broadcast India
Next: TSL Products Showcases fanavaozam-baovao amin'ny fantsom-peo Audio Monitorin Solutions ary Rafitra fanaraha-maso Broadcast any amin'ny NAB NY 2019
Fitaovana sy mpiasan'ny drafitra: Trana fidirana (1-3 taona traikefa)
Fifandraisana amin'ny fifandraisana sy ny fampahalalam-baovao
Injeniera amin'ny feo Audio
Product Engineer - Lalao Car Race
Fampidirana haingam-pandrafetana feno mpamorona / Sales consultant
Mpamorona sary (Amazon A + Content) - anatiny
Fanambarana NAB momba ny fisotroan-dronono nataon'i Greg Walden